Nhau - Chii chinonzi Mold Base?
Chii chinonzi base base?
Iyo yakazara seti yekuumbwa kwekugadzirwa kweiyo chaiyo hupfu zvigadzirwa nekudzvanya kana kudzoreredza.
Uye zvakare, rutsigiro rweforoma runonziwo hwaro hweforoma. Semuenzaniso, muchina unofa-unokanganisa unogadzirisa uye unogadzirisa zvikamu zvakasiyana zvemuumbwa zvinoenderana neyakajairwa uye chinzvimbo, uye chikamu chinogona kuiswa pamuchina wekufa-unodanwa unonzi chigadziko cheforoma, uye yekumanikidza nzira, iyo kutungamira mashandiro, uye pre-kudzivirira Iyo yekumisikidza mashandiro inoumbwa nedhifa pad uye chigaro ndiro.
Parizvino, kushandiswa kweforoma kunosanganisira zvese zvigadzirwa (senge mota, nzvimbo yekutenderera, zvido zvezuva nezuva, kutaurirana kwemagetsi, zvekurapa, nezvimwewo). Chero bedzi iri nhamba hombe yezvigadzirwa, kugadzirwa kweforoma kuchizoshandiswa, uye chigadziko chevhu chisingapatsanurike chikamu cheforoma. Parizvino, iko kurongeka kunodiwa kweforoma mabhesheni kuchatemwa zvinoenderana nezvigadzirwa zvinodiwa maererano nematanho akasiyana.
Iyo chigadziko cheforoma chigadzirwa chakapetwa chemuforoma, icho chinoumbwa nesimbi simbi ndiro inokodzera zvikamu, uye zvinogona kunzi ndiwo marangwanda eforoma rese. Nekuda kwemisiyano mikuru mukugadziriswa kunoitwa mune zvigadziko zveforoma uye zvigadzirwa, vagadziri veforoma vachasarudza kuodha mabhuvhu kubva kune vagadziri furemu vagadziri, vachitora mukana wekugadzira zvakanakira mapato ese kuvandudza huwandu hwekugadzira uye kugona.
Mushure memakore ekuvandudza, indasitiri yekugadzira indasitiri yakura. Kuwedzera kune echinyakare mafomu eforoma, vagadziri veforoma vanogona zvakare kusarudza zvakaenzana mafomu zvigadzirwa zvigadzirwa. Iyo yakajairwa formwork inowanikwa mune akasiyana masitaera, uye nguva yekuendesa ipfupi, kunyangwe yakagadzirira kushandisa, ichipa vagadziri veforoma nekuchinjika kukuru. Naizvozvo, kufarirwa kweyakajairika formwork kuri kuwedzera.
Muchidimbu, fomu racho rine preforming chishandiso, chinzvimbo chekumisikidza, uye mudziyo wekubvisa. Kazhinji inogadzirirwa sepaneru, Bhodhi (yepamberi modhi), B bhodhi (yekumashure modhi), C bhodhi (square iron), yepasi ndiro, thimble pani, thimble pasi ndiro, uye gwara rekutungamira, pini yekudzoka uye zvimwe zvikamu zvekusiya.
Zvadaro: Chii Chinomhanya Sisitimu YeJekiseni Mould
Pashure: Ndeapi Iwo Ese Mapato Ejekiseni Mould?